Cali Guray Gudoomiye ku xigeenka 3aad ee Xisbiga UCID oo qoraal ku sheegay in ay ka Maqan tahay Kuraastii Gobolada Barigu ku lahaayeen Golaha Wakiiladu. - Haldoornews
Hargeysa(Haldoornews)-Gudoomiye Cali Yuusuf (Cali Guray) oo qoraal kooban soo dhigay boggiisa uu ku leeyahay Facebook waxa uu kaga hadlay doorashada golaha wakiiladu ee ay Xukuumada Silaanyo Dib u Dhigista ku samaysay.
Hoos ka Akhriso Qoraalkiisa.
KURAASIDII BEELAHA BARIGA SIDII BAY BEESHA DHEXE U HAYSANAYSAA AMMA HA IS DIIWAANGELIYAAN AMA YAANAY IS DIIWAANGELIN EH ILAAHAY HORTII MAAHA CADAALAD
Sida aynu ognahay beryan meel wanaagsan ayay beelaha berigu, siiba Reer Sool iyo reer Sanaagba taagnaayeen. Waxaynu ognahay in tiro badan oo iyaga ka mid ihi isu diiwaangeliyeen doorashooyinka mudaysan 28/3/2017ka. Ahmiyadooda ugu ee doorashadu waxan qabaa in ay tahay kuraasida Wakiilada oo saamigii ay ku lahaayeen lagu bililiqaystay sheekadii is xambaarka. Hadii la yidhaa doorashadii Wakiiladu dhicinayso oo kuraasidiinii sidii bay beesha dhexe ugu fadhiyayaan taladiinuna waxay ka go’aysaa xildhibaanada reerkiina ee is xambaarka ku yimi maxaa u malaynaysaan natiijada ka soo bixi doonta Shirka loo balansan yahay ee Madaxwaynuhu mudeeyay? Miyaase xaq loogu leeyahay hadii aan sedbursiimo loo haynin in lagu yidhaa la idiinma ogola in waxbaba ka soo ceshataan xaqii idinka maqnaa? Kuwa taasi wada ee la garanayaa miyay yihiin kuwo Somaliland isu dhan doonaya? Madaxwayne Silanyo oo aan isagu tartankaba ku jirin sidey u saamayn doontaa taariikhdiisa hadii uu shakhsi ama shakhsiyaad danahooda gaarka ah u burburiyo Dastuurka Somaliland oo uu ganafka ku dhufto Go’aankii Maxkamadda Sare isla markaana Somalland iyo mid nimadeeda wiiqo rejedii laga qabay wadahadalada Somaliland ee beelaha bariga uu gacantiisa ku burburiyo beelaha barigana uu gaadhsiiyo halkii markii hore ay joogeen iyo meel ka sii fog marka uu iska hortaago xaqooda? Miyaanay u arki karin in uu doonayo in kuraasida Harti reerkiisu iska haysto? Waa maxayse waxa loo ogol yahay ee kale marka kuraasidoodii ay xaqqa u lahaayeen aan loo ogolayn xataa inay badh ka mid ah oo intii yarayd ah ay la soo noqdaan?
Anigu uma arko danta Madaxwaynaha iyo danta Qaranka in midina ay ku jirto in la laalo doorashada Wakiilada ee waxa sharci ah oo suurtogal ah in saami qaybsi cusub oo lagu heshiis yahay la keeno hadii kale waxa sharci ah in kii hore mar kale lagu galo oo ka fiican in la yidhaa ku cusubna la keeni maayo KII horena lagu geli maayo ee waxa iska fadhiyaya ninanka shan sanadood la doortay ee markay dhanaysteen lagu daray 7da sanadood ee kale? Kuwa sidaa Madaxwaynaha kula taliyay ama ha garto ama yuu garan eh wanaagiisa kamay talin ee waxay ka taliyeen xumaantiisa.